IWatermark + Ye-iOS Yengeza Ukubukelwa Kwamavidiyo we-4K | Plum Amazing
ISan Francisco, CA - iWatermark, iyithuluzi elingu-1 nelithengisa kuphela elitholakala kuwo wonke amapulatifomu ama-4, i-iPhone / i-iPad, iWindows, i-Android neMac. IWatermark + iyithuluzi le-watermarking elidume kakhulu nelinamandla kuwo wonke amapulatifomu.
“Sekuyiminyaka ngincike kwiWatermark ukungivumela ukuthi ngibeke kalula uphawu lwami ezithombeni zami ngqo kwi-iPhone yami noma i-iPad. Kodwa-ke, i-iWatermark + esanda kukhishwa ithatha le nqubo iye ezingeni elisha ngokuphelele. ”
Umthwebuli zithombe uTerry White
Umvangeli we-Adobe Worldwide Creative Cloud Design noMlobi Othengisa Kakhulu.
Thepha lapha ukuthola imininingwane noma ukulanda inguqulo yamahhala.
Isikhulu esiphezulu sePlum Amazing, uJulian Miller uthe “Uma wabelana ngesithombe noma ividiyo emangalisayo oyithathe nge-imeyili, i-Facebook, i-Instagram, i-Twitter, njll. njengomdali. ” Wamisa isikhashana, wengeza,
Thepha lapha ukuthola imininingwane noma ukulanda inguqulo ekhokhelwayo.
Njengoba le nguqulo ingekho mahhala uma uqinisekisiwe cindezela sicela uphendule ngemininingwane futhi sizophendula ngekhodi ye-Apple promo.
UJulian Miller uqhubeke “Ngale nguqulo entsha iWatermark + ingakwazi ukubheka amavidiyo we-4K nokungenisa imidiya, izithombe namavidiyo, kusuka kumasevisi wefu afana ne-iCloud, iDropbox, i-GoogleDrive, i-Box, i-Adobe Creative Cloud namanye. I-iWatermark + iyaqhubeka nokuba ukuphela kohlelo lokusebenza lwe-watermark lwe-iOS. With izici eziningi iyeza maduze. ”
Kalula, vikela futhi uvikele izithombe zakho nge-Text, Graphic, Text On Arc, QR Code, Signature, Border, Vector, Resize, Custom Filters, Metadata ne-Steganographic watermark. Uma sekungezwe esithombeni lawa ma-watermark abonakalayo futhi / noma angabonakali akhombisa ukuthi isithombe noma ividiyo yenziwe, yahlelwa futhi ingeyakho. Lezi zici ezihlukile zenza iWatermark + ibaluleke kongoti nabaqalayo.
Izinhlobo ze-watermark (ngenhla) ezitholakala ku-iWatermark + azitholakali kunoma iyiphi enye isoftware.
Amandla wokungeza ama-watermark abonakalayo kanye / noma angabonakali ahlukile ku-iWatermark +.
Usebenzisa iWatermark + ngaphakathi kwezinye izinhlelo zokusebenza njengesandiso sokuhlela isithombe sama-watermark nakho kuhlukile.
Ukungenisa kusuka kuzo zonke izinsizakalo zefu njengeDropbox, iCloud, Ibhokisi, i-Google Drayivu, i-OneDrive, i-Adobe Creative Cloud, njll kuhlukile.
Ukukala okuhlobene nokuphelele kwe-batch watermarking yezithombe zosayizi ohlukile nokuma. Ehlukile!
Sebenzisa i-EXIF, i-IPTC, i-GPS kanye neminye imethadatha njenge-Tag ku-watermark yombhalo ukubonisa imethadatha esithombeni kungenye into ehlukile.
Ezinye izinhlobo zama-watermark ziyabonakala kanti ezinye azibonakali. Zombili zisebenza ngezinhloso ezihlukile. I-watermark ebonakalayo ilapho ubeke khona uphawu lwakho noma isiginesha esithombeni sakho. Ama-watermark angabonakali awasobala kangako futhi imininingwane ingcwatshwe kufayela noma kwimininingwane yombala wesithombe.
Ama-watermark wakho wangokwezifiso agcinwa atholakalayo futhi angasetshenziswa ngokuthepha kunoma yisiphi isithombe noma ividiyo. Esinye isici esiyingqayizivele nesibalulekile.
Ama-Watermark abonakalayoImibhalo- Noma imuphi umbhalo ofaka imethadatha enezilungiselelo zokushintsha ifonti, usayizi, umbala, ukujikeleza, njll.
Umbhalo Arc - Umbhalo osendleleni egobile.
Graphic yeBitmap- Umdwebo kuvamise ukuthi ube yifayela le-.png elisobala elifana nelogo yakho, uphawu, uphawu lwe-copyright, njll.
Umngcele - faka imingcele ekhethekile ezithombeni.
I-Vector Graphic- Sebenzisa ama-vector (ama-SVG's) angaphezulu kuka-5000 ukubonisa ihluzo ezinhle kunoma yisiphi isayizi.
Shintsha usayizi - - thepha ukuze ungeze usayizi owenziwe ngokwezifiso njenge-watermark kunoma iziphi izithombe (izithombe).
Isihlungi sangokwezifiso - - thepha ukuze ungeze isihlungi sangokwezifiso njenge-watermark kunoma iziphi izithombe.
QR Code - Uhlobo lwebhakhodi olunolwazi olufana ne-imeyili noma i-url ekubhaleni kwalo.
Isiginesha- Sayina, ngenisa noma skena isiginisha yakho ku-watermark ukuze usayine okudaliwe kwakho.Amanzi angabonakali ama-WatermarkMetadata - Ukungeza imininingwane (njenge-imeyili yakho noma i-url) engxenyeni ye-IPTC noma i-XMP yefayela lesithombe.
I-StegoMark - I-StegoMark yindlela yethu yobunikazi yokufaka imininingwane efana ne-imeyili yakho noma i-url kwimininingwane yezithombe uqobo. Ingatholakala noma ifihlwe nge-password.
IWatermark iyithuluzi lobuchwepheshe elikhethekile lokuthwebula izithombe nevidiyo. Engabizi kakhulu, esebenza kahle kakhulu, esheshayo futhi elula ukuyisebenzisa bese i-PhotoShop. I-iWatermark yakhelwe kuphela ukuthwebula izithombe ngumthwebuli zithombe wabathwebuli zithombe. Kubaluleke kakhulu kunoma ngubani owenza imithombo yezokuxhumana enjenge-Facebook, Instagram, Twitter, njll.
* Ama-watermark izithombe namavidiyo futhi.
* Ngenisa izithombe noma amavidiyo kusuka ku-Camera Camera, iCloud, Dropbox, GoogleDrive, Box nezinye izinsizakalo zefu.
* Ukusetshenziswa kwama-watermark amaningi ezithombeni (noma) kumavidiyo.
* I-Watermark eyodwa noma izithombe eziningi kumodi ye-batch.
* Amandla wokwakha, okugcina umlando nokusebenzisa izinhlobo eziyi-12 zama-watermark, kakhulu kunanoma yiluphi olunye uhlelo lokusebenza lwe-watermarking. Izinhlobo eziyi-11 eziphelele ze-watermark = 9 ebonakalayo + 2 ezingabonakali ezibalwe ngezansi.
Izinhlobo Ezibonakalayo ze-Watermark (9)
- Umbhalo we-Watermark - bese ushintsha ifonti, umbala, i-engeli, i-opacity, njll.
- I-Arc Text Watermark - bese ushintsha ifonti, umbala, i-angle, i-opacity, njll.
- I-Bitmap / Logo Watermark - ngenisa i-logo yakho noma usebenzise ubuciko kusuka kumtapo wezincwadi ofakiwe.
- IVector Watermark - sebenzisa okwakhiwe kuma-watermark ama-vector.
- I-Border Watermark - beka umngcele okhethekile oseduze kwesithombe.
- Isiginesha Watermark - iskena, yakha futhi isebenzise i-watermark isebenzisa isiginesha yakho.
- I-QRCode Watermark - idala i-watermark efana nebhakhodi, efundwa yinoma iyiphi ikhamera ye-smartphone futhi ingaqukatha izinhlamvu ezifika ku-4000 zolwazi, njengegama, i-imeyili ne-url.
- Shintsha usayizi we-watermark - thepha ukuze ungeze usayizi owenziwe ngokwezifiso njenge-watermark kunoma yisiphi isithombe.
- Izihlungi ngokwezifiso - thepha ukuze ungeze isihlungi sangokwezifiso njenge-watermark kunoma yisiphi isithombe.
Izinhlobo ezingabonakali zamanzi (2)
- Imethadatha Watermark - yokwenza ama-watermark afaka amathegi we-IPTC / EXIF ​​(njengolwazi lwekhamera, i-GPS, ilungelo lobunikazi, njll.)
- I-Watganographic Watermark - yokweshumeka / ukubhala imininingwane efana negama, i-imeyili kanye / noma isixhumanisi sewebhusayithi kwimininingwane yombala wesithombe. * Isebenza ngokuzimela yodwa noma ngokubambisana ne-Lightroom, Photoshop, Apple Photos, Izithombe ze-Google nabanye abahleli bezithombe
* Iqoqo noma ukucubungula ngokulandelana.
* OKUBALULEKILE: Ukukala okuhlobene noma okuphelele kwama-watermark. Kubalulekile lapho i-batch icubungula izithombe zokulungiswa nezokuma ezihlukile
* Design, hlela bese uphatha umtapo watermark.
* Amathegi yimethadatha (i-GPS, i-Exif, i-XMP, izinombolo, usuku / isikhathi) ezingangezwa kuma-watermark wombhalo.
* Hlola kuqala kalula
* Okokufaka / kokukhipha kusuka / kuzo zonke izinhlobo ezinkulu zefayela i-JPEG, TIFF, PNG, RAW, njll.
* Dala umbhalo, ingcaca, noma ama-watermark e-QR.
* Lungisa i-opacity, ifonti, umbala, umngcele, isikali, ukujikeleza, isithunzi, imiphumela ekhethekile, njll.
* Amafonti amahle kakhulu angama-292 wama-watermark wombhalo wakho.
* Bhala umbhalo we-emboss.
* Isithwebuli sesiginesha ukungenisa ngokushesha isignesha yakho noma enye ingcaca njenge-watermark.
* Ukubuka kuqala bukhoma nokuhlelwa kwefonti, umbala, isikali, i-opacity, usayizi, isikhundla ne-engeli.
* Buka imethadatha & exif ezithombeni.
* Uhlelo lokusebenza olusheshayo olunama-32/64 olunemicu eminingi olungasebenzisa ama-CPU / ama-GPU.
* I-iWatermark + kuphela ene-watermark ene-steganographic eshumeka / ibethela imininingwane ngokungabonakali esithombeni. * Ibhukwana elihle nokusekelwa.
* Yabelana kalula ku-Facebook, kuFlickr, ku-Instagram, ku-Twitter nakwezinye eziningi.
* Umphathi weWatermark ongalandela amakhulukhulu ama-watermark. Imenenja futhi ivumela ukukhiya / ukuvula, ukuqamba kabusha igama, ukususa, ukubuka kuqala ama-watermark.
* Kuvuselelwa njalo futhi kuthuthukiswe.
* Okuningi ...
Emakhulwini eminyaka adlule ama-watermark aqala njengezimpawu zokuhlonza ezazisetshenziswa ngenkathi kwenziwa iphepha. Ngesikhathi sokukhiqizwa kwephepha iphepha elimanzi lagxivizwa ngophawu / uphawu. Indawo emakiwe yahlala izacile kunephepha elizungezile, yingakho igama le-watermark. Lelo phepha, lapho lomile futhi libambelele ekukhanyeni, lalikhombisa i-watermark. Kamuva le nqubo yasetshenziselwa ukuqinisekisa ubuqiniso bemibhalo esemthethweni, imali futhi ngokuvamile ukuvimbela ukukhwabanisa.
I-watermarking yedijithali iyindlela yakamuva yokwenza i-watermarking. Ngokufana nama-watermark asephepheni, ama-watermark edijithali angasetshenziswa futhi ukukhomba umnikazi / umdali nokuqinisekisa imidiya yedijithali njengezithombe, umsindo nevidiyo.
Ukungeza i-iWatermark ngobuqili, noma ngabe isithombe sakho noma ividiyo yakho iya kuphi, ukuthi ingeyakho.
Njalo, iWatermark enegama, i-imeyili noma i-url ukuze indalo yakho ibe nokuxhumana okuthile okubonakalayo komthetho kuwe.
Phromotha futhi uvikele inkampani yakho, igama newebhusayithi ngokufaka iWatermarking zonke izithombe / amavidiyo owakhiphayo.
Usayine ngokwedijithali umsebenzi wakho / izithombe / ingcaca / umsebenzi wobuciko nge-iWatermark, ubuyise impahla yakho yengqondo futhi ugcine ukubonwa okukufanele.
Kalula, vikela futhi uvikele izithombe zakho ngama-iWatermark abonakalayo nangabonakali abonisa ukuthi adalwa futhi aphethwe nguwe.
Inguqulo 4.5 Version Izinguquko
- amavidiyo we-iWatermark 4K, 1080, 720 njll.
- Ngenisa izithombe ezilodwa noma eziningi noma amavidiyo avela kumasevisi we-Cloud njenge-iCloud, iDropbox, i-Google Drayivu, Ibhokisi, njll.
- Ukusetshenziswa okungcono kwememori. Lokhu kubalulekile njengoba izinhlelo zokusebenza zefoni ziqala ukuba namandla kunezinhlelo zokusebenza zedeskithophu. Yebo, siyazi ukuthi lokho kuzwakala kungumsangano kodwa kuyenzeka.
Lolu hlelo lokusebenza luphelele ukusetshenziswa ne-Apple iPhone / iPad, Canon Inc., Nikon Inc., Olympus Inc., Sony Inc., Samsung, SLR, amakhamera ajwayelekile.
IPlum Amazing Software namuhla imemezele inguqulo 4.5 ye-iWatermark + ye-iOS. IWatermark + engeza i-watermarking yobuchwepheshe bevidiyo engu-4K. IWatermark + iyona kuphela ithuluzi le-watermarking elitholakala kuwo wonke amapulatifomu ama-4, i-iPhone / i-iPad, i-Android, iWindows ne-Mac. I-iWatermark + wuhlelo lokusebenza olubalulekile lwe-watermarking labathwebuli bezithombe abangochwepheshe bebhizinisi nokusetshenziswa komuntu siqu. Ukuqhutshwa kwenqwaba noma ukulandelana. Ukukala okuhlobene nokuphelele. Idatabase yawo wonke amasampula nama-watermark wangokwezifiso womsebenzisi atholakala ngokuthepha. Izinhlobo zama-watermark zifaka, Umbhalo, i-Graphic, i-Vector, i-Text On Arc, i-QR Code, i-Border Signature, Resize, Custom Filter, Metadata ne-Steganographic.
IWatermark + Imahhala nge-iPhone / iPad (ingeza okuncane 'Okudalwe ngeWatermark +' ezithombeni) Landa isixhumanisi
IWatermark + Ikhokhelwe i-iPhone / iPad (okufushane umnyuziki, akukho zikhangiso, akukho ukuthenga okungaphakathi nohlelo) Landa isixhumanisi
Izifundo ze-iWatermark + ze-YouTube - uchungechunge oluwusizo lwezifundo / ukuqonda okufushane kakhulu.
Imininingwane engaphezulu ku-Plum Amazing + Manual
Isekhondi elingu-30 ukunambitheka kwevidiyo -
Isithonjana sohlelo lokusebenza lweWatermark + 1024 × 1024
Plum Iwebhusayithi Emangazayo
Isitolo esimangalisayo sePlum
IPlum Amazing, i-Llc yinkampani ebanjelwe ngasese ezinikele ekwenzeni izinhlelo zokusebenza ze-iOS, Windows, Android ne-Mac. I-Plum Amazing ingumhlinzeki womhlaba wonke wezinhlelo zokusebenza zamaselula nezamadeskithophu kusukela ngo-1995. IPlum Amazing idala futhi ithengise isoftware ngeyayo, iwebhusayithi yakwaGoogle ne-Apple kodwa futhi yenza nomsebenzi wokuthuthukisa (wokuhlelela) ezinye izinkampani namakhasimende ikakhulukazi endaweni yezithombe. Sinesifiso sokwakha imikhiqizo emihle efana ne-CopyPaste, iWatermark, Essential, iClock, TinyAlarm, TinyCal, PixelStick, MountWatcher, SpeechMaker, PhotoShrinkr neminye. I-Copyright (C) 2018 Plum Amazing. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Cindezela oxhumana naye
Iphrofayela ye-Facebook: Buka
Iphrofayela Ye-LinkedIn: Buka